မင်းရဲ့ #MyHodgesStory ကဘာလဲ? အွန်လိုင်းသို့မဟုတ် On- ကျောင်းပရဝုဏ်» Hodges တက္ကသိုလ်
သင်၏ #MyHodgesStory ကဘာလဲ။
Hodges တက္ကသိုလ်ရဲ့ Covid protocols များပြောင်းပါပြီ
မျက်နှာဖုံးများ အကြံပြုဒါပေမယ့်မရ လိုအပ်.
လူမှု Distancing ဖြစ်ပါတယ် အားပေး.
နှာချေအစောင့်လက်ရှိအချိန်တွင်အရပျ၌ရှိနေဆဲ; ရက်ပေါင်း ၃၀-၆၀ အတွင်းပြန်လည်သုံးသပ်ပါမည်။
တည်းခိုခန်းများရှိကော်ဖီအိုးများမှာမရပ်တန့်ဘဲရှိနေသည်။ ဤသည်ကိုရက်ပေါင်း 30 အတွင်းပြန်လည်သုံးသပ်ပါလိမ့်မည်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းတို့ဇာတ်လမ်းဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါစေ၊ သင်ဟာလက်ရှိ၊ ပြန်လာတဲ့ဒါမှမဟုတ်ကောလိပ်ကျောင်းသားဖြစ်ဖြစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မင်းရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်လိုအပ်တဲ့စွမ်းရည်တွေကိုပေးဖို့သင့်ရဲ့ပညာရေးအတွက်လမ်းကြောင်းတွေတီထွင်ခဲ့တယ်။ ဒါ့အပြင်ငါတို့ရဲ့အချိန်ဇယားကိုချိန်ညှိပြီးပြီဆိုရင်သူတို့ကမင်းတို့ဘဝကိုလှည့်ပတ်သွားကြမယ် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားတဲ့တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Hodges U သင်!
ဘွဲ့၊ ဘွဲ့၊ တွဲဖက်သို့မဟုတ်လက်မှတ်များကျွန်ုပ်တို့တွင်ရရှိပါသည် ဒီဂရီပရိုဂရမ်များ သင်၏ပညာရေးအောင်မြင်မှုအတွက် Plus အားတစ်ခုအသိအမှတ်ပြုအဖြစ် အွန်လိုင်းတက္ကသိုလ်ငါတို့၏ဒီဂရီပရိုဂရမ်များစွာကိုအွန်လိုင်းမှလုံးဝယူနိုင်သည်။
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်။ အသိအမှတ်ပြု အရှိန်။ သင်ပတ်ပတ်လည်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ။ အနီးမှာနေပါ။ ဝေးဝေးသို့သွားပါ Hodges U.
Hodges တက္ကသိုလ်သည်သတ်မှတ်ချက်အရရရှိသောကြောင့်ဂုဏ်ယူသည် ဟစ်စပန်းနစ်အမှုဆောင် Institution မှ က ဟစ်စပန်းနစ်ကောလိပ်များနှင့်တက္ကသိုလ်များအသင်း - Hablamos Español
Hodges U #2အဆင့်! - လစာရမှတ်အားဖြင့်ဖလော်ရီဒါရှိ ၂၀၂၁ အကောင်းဆုံးကောလိပ်များ
သွားဘက်ဆိုင်ရာသန့်ရှင်းမှု CODA ဆိုက်ကိုလာရောက်လည်ပတ်သည်
သွားဘက်ဆိုင်ရာအသိအမှတ်ပြုခြင်းဆိုင်ရာကော်မရှင်သည်လာမည့်အောက်တိုဘာ ၁၂ ရက်မှ ၁၃ ရက်အထိ Hodges University သွားဘက်ဆိုင်ရာသန့်ရှင်းရေးအသိအမှတ်ပြုနေရာကိုလာရောက်လည်ပတ်ရန်တတိယပါတီမှတ်ချက်များကိုလက်ခံသည်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်သွားဘက်ဆိုင်ရာအသိအမှတ်ပြုခြင်းဆိုင်ရာကော်မရှင်မှပူးတွဲစာရွက်စာတမ်းကိုကြည့်ပါ။ link ကိုအသုံးပြုပြီးမှတ်ချက်များမည်သို့ပို့ရမည်ကိုပိုမိုလေ့လာပါ ဒီမှာ.
သင်ရွေးချယ်သည့်အခါသင်၏အနာဂတ်ကိုတာဝန်ယူပါ သင်၏အွန်လိုင်းပညာရေးအတွက် Hodges တက္ကသိုလ်။ အလုပ်လုပ်နေသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူများ၏ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်ကူညီရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောအွန်လိုင်းပုံစံဖြင့်အရှိန်မြှင့်လစဉ်သင်တန်းများပေးပါသည် ယနေ့ virtual virtual စာသင်ခန်းမှသင်ကိုယ်တိုင်၏အာရုံကိုမည်သို့ရယူနိုင်သည်ကိုပိုမိုရှာဖွေပါ။
ရာခိုင်နှုန်း PTA Pass နှုန်း
Hodges သည်ကြီးစွာသောအတွေ့အကြုံဖြစ်သည်။ သင်အချိန်ဆွဲ။ မရပါ သူတို့ကိုသင်ပေးတဲ့သင်ကြားရေး၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ သင်ယူမှုပတ်ဝန်းကျင်သည်မယုံနိုင်စရာဖြစ်သည်။ သငျသညျကြိုဆိုခံစားရနှင့်သင်ယူချင်တယ်။ ပညာရေးသည်အတင်းအကြပ်မလုပ်ဘဲလူတိုင်းကိုချစ်သည်။ ဆရာများကကောင်းမကောင်းအားဖြင့်သင်နှင့်အတူရှိနေပြီးသင်တစ်စုံတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းသင့်အားအသိပေးပါစေ။ ၎င်းသည်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့၏အားထုတ်မှုနှင့်တစ်နှစ်ပတ်လုံးကောင်းမွန်သောအထောက်အကူပြုစနစ်ဖြစ်သည်။ ငါလုပ်သမျှအားလုံးမှာစိတ်အားထက်သန်ဖို့နဲ့ဆက်ကပ်အပ်နှံဖို့ Hodges ကကျွန်မကိုသင်ပေးခဲ့တယ်။
ငါအွန်လိုင်းရှုထောင့်ပျော်မွေ့ခဲ့သည်။ အဲဒါကကျွန်တော့်ကိုအချိန်ပြည့်အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ကြင်ဖော်မဲ့မိခင်တစ်ယောက်ဖြစ်နေချိန်မှာကျောင်းတက်ဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်။ အဆိုပါပမာဏစီမံခန့်ခွဲမှုဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်ပါမောက္ခမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ရှိကြ၏။ ငါကျိန်းသေအခြားသူများမှ Hodges တက္ကသိုလ်မှအကြံပြုလိမ့်မယ်။
Hodges တက္ကသိုလ်သည်တက်ရောက်ရန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောကျောင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အချိန်ပြည့်မှအချိန်ပိုင်းသို့အတန်းများတက်ပြီးအတိတ် (၅) နှစ်တာကာလအတွင်းပြန်ပြောင်း။ ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အချိန်ပြည့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်နေစဉ်။ တက်ရောက်ရန်အတန်းများကိုရှာဖွေနေစဉ်ကျွန်ုပ်၏ဘွဲ့အတွက်မည်သည့်အတန်းများနှင့်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်ကိုရှုပ်ထွေးစဉ်တွင်ကျွန်ုပ်သည်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလွယ်ကူစွာနှင့်နာကျင်မှုမရှိအောင်ပြုလုပ်ထားသောအထူးပြု ၀ န်ထမ်းများနှင့်တွေ့ခဲ့သည်။ မစ္စစ်ဂျဲနက် Colon ဟာနတ်သမီးပုံပြင်တစ်ခုပါပဲ။ သူကကျွန်မကိုအမြဲကူညီပေးတယ်၊ မေးခွန်းတွေဖြေတယ်၊ ​​အရာရာကိုအချိန်မီသေချာအောင်လုပ်တယ်။ သူမအလုပ်ကိုဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်းသည်မယုံနိုင်စရာဖြစ်ပြီးသူ၏စိတ်အားထက်သန်သောနည်းလမ်းများကကျွန်ုပ်အားဆက်လက်တွန်းအားပေးရန်ကူညီသည်။ ငါမဟာမဟာဘွဲ့ကိုတက်ဖို့တောင်စဉ်းစားခဲ့ဖူးတယ်၊ မစ္စစ်ကိုလိုကို ၀ န်ထမ်းအဖြစ်ခန့်ထားခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သူနဲ့သူ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုကျွန်တော်အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။